Sibambe iqhaza Ekamu Lokuqeqesha Abadayisi Lase-Alibaba ngesonto eledlule
I-Amso Solar iyiqembu elincane, futhi abantu besikhathi samanje abadingi umholo kuphela kepha futhi nendawo lapho bangathuthuka khona. I-Amso Solar ibilokhu iyinkampani egxile ekuqeqeshweni kwabasebenzi, futhi sizimisele ukusiza wonke umsebenzi ukuthi azithuthukise. Sikholelwa ukuthi trai corporate ...
Amaseli elanga ajwayelekile asetha irekhodi elisha, ngokusebenza kahle kokuguqulwa okungu-18.07%
Ubuchwepheshe bamuva be-OPV (i-Organic Solar Cell) obudalwe ngokuhlanganyela yithimba likaMnu Liu Feng ovela eShanghai Jiaotong University naseBeijing University of Aeronautics and Astronautics uvuselelwe waba ngu-18.2% kanti amandla okuguqula abe ngu-18.07%, okwenza irekhodi elisha. ...
Ubuchwepheshe obusha esitokisini se-photovoltaic cell-transparant solar
Amaseli elanga abonakalayo akuwona umqondo omusha, kepha ngenxa yezinkinga ezibonakalayo zoqweqwe lwe-semiconductor, lo mqondo kube nzima ukuhumushela ekusebenzeni. Kodwa-ke, muva nje, ososayensi e-Incheon National University eSouth Korea bakhiqize i-cel esebenza kahle futhi ebonakalayo ...
Amaphuzu avelele we-2020 SNEC
I-14th SNEC ibibanjwe ngomhlaka 8th-10 Agasti 2020 eShanghai. Yize kubanjezelwe yilo bhubhane, abantu basakhombise ukuwuthanda kakhulu lo mcimbi kanjalo nomkhakha welanga. Ngokubuka konke, sabona amasu amasha aphambili kuma-solar panels agxila kosayizi abakhulu be-crystalline wafers, high-density, a ...